« Festival du Conservatoire EGM »: niavaka ny seho famaranana | NewsMada
« Festival du Conservatoire EGM »: niavaka ny seho famaranana
Nanomboka tany Toamasina ny 14 sy 15 jolay. Nitohy tamin’ny fampianarana hira sy fampirantiana tao amin’ny Tahala Rarihasina ny 22 jolay. Narahin’ny “Masterclass bagasy” ny 22 jolay sy ny fampisehoana nataon’ny mpianatra tany Antsirabe ny alahady teo. Nofaranana tamin’ny fampisehoana nataon’ny “Orchestre du Conservatoire EGM” kosa ny alahady teo, tetsy amin’ny Sainte Famille Mahamasina ny “Festival du Conservatoire EGM”.
Naneho ny talentany ireo mpianatra nivondrona anatin’ny orikesitra, nahitana mpitendry violins 15, piano telo, amponga maroanaka sy zavamaneno ravaka ary saxophone telo, ankoatra ireo mpihira. Hira vahiny sy malagasy ary hiram-pivavahana no nentin’ireto mpanakanto ireto an-tsehatra.
“Ezahina ho tanterahina mandavantaona ny hetsika toy izao”, hoy ny filazan’ny Dr Aintso Ranaivo, tale jeneraly sady filoha mpanorina ny EGM etsy 67 ha. “Santatra am-bavarano ihany iny, fa ny manetsa be mbola” ho avy, hoy ihany ity tompon’andraikitra ity.